कुलमान फोनमा भए भावुक ! पुण्य र कुलमान बीच फोन वार्ता – भिडियो हेर्नुहोस – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Videos/कुलमान फोनमा भए भावुक ! पुण्य र कुलमान बीच फोन वार्ता – भिडियो हेर्नुहोस
कुलमान फोनमा भए भावुक ! पुण्य र कुलमान बीच फोन वार्ता – भिडियो हेर्नुहोस
भिडियो तलको समाचारको अन्त्यमा राखिएको छ,पुरा हेर्नुहोला । काठमाडौँ, भदौ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले को भिड–१९ वि रुद्धको खोपको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलको काम अगाडि बढाउन चिनियाँ कम्पनी होङ् सीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ । तर होङ् सीले गर्ने तेस्रो चरणको ट्रायलमा चिनियाँ नागरिक मात्रै सहभागी हुने मन्त्रालयले प्रष्ट्याएको छ ।
मन थामेर हेर्नुस, सिंगो परिवारको यसरि एक चि’हान बन्यो, छोराको बंश’नै सिधियो, ह’त्या यसकारण यसरी भयो !(भिडियो)
एकै पटक ५ बच्चा जन्माउने २८ बर्षिय सोनिका, यसरी हुर्काइदै छ अस्पतालमा बच्चा (भिडियो हेर्नुस्)